LEOPARD AYAA KA SOO HORJEEDA BOODADA IYO SHILINTA, IYO SIDOO KALE SHAAMBADA, BUUFINTA IYO QARXINTA - GURI, GURI
Boqortooyada Boqortooyada Sacuudiga - "Leopard" ayaa ka soo horjeeda boodada iyo shilinta, iyo sidoo kale shaambada, buufinta iyo jilbaha
Saaxiibada ugu fiican ee dadku waa xayawaan. Qoysaska intooda badani waxay leeyihiin xayawaan furan gurigooda ama guriga - bisad ama eey.
Tani waa farxad weyn, laakiin sidoo kale waa masuuliyad, taas oo ka mid ah daryeelka caafimaadka xayawaanka.
Badanaa, xayawaanku waxay la qabsadeen waxyeello caadi ah - boodada iyo shilinta. Waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato dhibaatadan sida ugu macquulsan.
Waxaa ka mid ah qaababka badan ee boodada ah ee xayawaanka ku jira goobaha muhiimka ah "Leopard"Qeyb ka mid ah shirkadu waxay soo bandhigaysaa daroogooyin kala duwan.
Dhibcaha ayaa ku dhejiya
BARS® ayaa ka soo horjeeda boodada iyo shilinta:
Waxyaabaha firfircoon: Fipronil - 50mg / ml, diflubenzuron - 1 mg / ml iyo dicarboximide (MGK-264) - 5 mg / ml iyo daawoyin.
Nidaamka codsiga: mar, codsi ku darso.
Qiyaasta: Waxay ku xiran tahay miisaanka.
Cabbiraadda khatarta: Marka loo eego heerka saameynta jidhka, waxaa lagu magacaabaa walxo dhexdhexaad ah oo halis ah.
Qiimaha: 120-220 roon.
Qalabka waxaa la isticmaali karaa 8 asbuuc laga bilaabo maalinta dhalashada isagoo fulinaya hababka caafimaadka ee looga hortago boodada, iyo sidoo kale shilinta iyo noocyada kale ee dulin.
DAREEN: Iska ilaali inaad la xiriirto indhaha, maadaama daroogadu tahay sun. Ha u isticmaalin bakaylaha.
Maaddooyinka firfircoon: waxaa ku jira maaddooyinka dabiiciga ah oo kaliya - laga soosaaray xannibaadda, laysinka saliidda ah ee muhiimka ah, allantoin iyo citric acid.
Gundhigidda: dhalada polymer 250 ml.
Habka codsiga: qoyan xayawaanka xayawaanka biyaha, ku dhaq shaambo, ku xoqin jirka oo dhan, ku dhaq biyo badan ka dib 3-5 daqiiqo.
Qiyaasta: isku qasan biyo kasta wax kasta.
Cabbiraadda khatarta: Marka loo eego heerka saameynta jidhka, waxay u muuqdaan inay yihiin walxo ammaan ah.
Qiime: 190 rubi.
Waxaa loo isticmaalaa dharka iyo kittens, iyo dadka waaweyn. Warshadaha dhirta iyo saliidaha lagama maarmaanka ah ee ku jira sunta shumaca ee shampoo.
Xayawaanku wuxuu la kulmi karaa falcelin xasaasi ah shakhsiyaadka shaambo (xoqid maqaarka, jeexjeex). Calaamadahaas, daroogada waa in si fiican loo dhaqo, siin eyga ama bisad daawada antihistamine.
Insektoakaritsidny buufiyaa Leopard:
Waxyaabaha firfircoon: Fipronil.
Bacaha: dhalooyinka caaga ah ee 100 iyo 200 ml sanduuqyada kartoonada.
Qiyaasta: 0.5-1.0 ml 1 kg ee miisaanka xoolaha.
Hal riix marka la isticmaalayo 200 ml oo miis ah ayaa bixisa qiyaas ah 0.5 ml, iyadoo la adeegsanayo 100 ml oo maadi ah - 0.25 ml oo diyaar ah.
Cabbiraadda khatarta: Marka loo eego heerka saameynta jidhka, waxay ka tirsan yihiin walxo dhexdhexaad ah.
Habka loo isticmaalo:
Xayawaanada waxaa lagu daaweeyaa dibedda ama meel hawo wanaagsan leh oo leh daaqadaha furan.
Si looga hortago xayawaanka ka lulaya, qoorta ama qoorta ayaa lagu xiraa.
Ka hor intaadan dhalada ku isticmaalin daroogada waa la ruxruxaa, adigoo qaboojiyaha ku dhajiya, madaxda ku buufi madaxiisa, adoo toosiya weelka aerosolka dusha laga daaweeyo fogaanta 25-30 cm.
Qiimaha: 212-328 rubles.
Daboolka eeyaha si ay ula dagaallamaan cayayaanka iyo tuubada:
Waxyaabaha firfircoon: Fipronil iyo diflubenzuron.
Foomka la sii daayo: cajalad polymeric ah 35, 50 iyo 80 cm dheer.
Habka codsiga: qoryaha ayaa la furay, oo xayawaanka lagu xayeysiiyaa, oo cabbiraya cabbirka si uu u dhexeeyo qoorta xayawaanka iyo qoryaha ay jirto farqiga u dhaxeeya 1-1.5 cm, dhammaadka bilaashka ah ayaa la mariyaa qalabka wax lagu dhejiyo, kharashka waa la jaraa.
Wuxuu ka difaacaa cayayaanka iyo caarada illaa 4 bilood.
Qiyaasta Hazard: sida ugu badbaado badan.
Ha u isticmaalin xayawaanka uurka leh iyo kuwa nuujinaya, waxay sidoo kale ka horjoogsaneysaa caruurta iyo ilbiriisha ilaa 2 bilood.
Qiimaha: 140 rubir.
Waxtarka daawooyinka "Bars" waa mid aad u sareeya. Dareemayaasha, buufin, shaamboo waxay la qabsadaan dulinka ka dib hal isticmaalka. Faa'iido kale oo aan faa'iido lahayn waa qiimaha hooseeya.
Nooc kasta ee daroogada aad dooratid, Barça si dhaqsi leh ayaa si dhaqso leh uga saari doona dhammaan cayayaanka aan fiicnayn ee jirka xayawaankaaga.